Kungani Sikhethe - I-Jiangyin Unite Top Heavy Industry Co., Ltd.
IZIZATHU EZI-7 ZOKUSIKHETHA
Sinekhwalithi ephezulu, ukusebenza kahle okuphezulu, ikhono le-R & D leqembu lezobuchwepheshe. Le nkampani inomgogodla we-ace wobuchwepheshe, umshini we-hydraulic wenza isipiliyoni ngaphezu kweminyaka engama-25, unikeze amakhasimende imishini ebizayo ebanzi yokugaywa kabusha nezisombululo.
8 isetha imigqa yokukhiqiza yokululama kumakhasimende asekhaya nawakwamanye amazwe ukuze ahlinzeke ngezinkinga zensimbi nezingezona ezensimbi. ezifanele izigayo ezinkulu zensimbi nezimboni zokugaywa kabusha.Imboni yokuncibilikisa insimbi ene-ferrous.
Wonke amapuleti ensimbi asetshenziswa emishinini enziwe nge-Q235, 45 #, 16Mn, 65Mn nezinye izincazelo ezihlukile ezivela kumkhiqizi wensimbi wasekhaya odumile. Amapuleti okugqoka egumbi lokuphakela enziwe nge-NM500 futhi aqinisekisa ikhwalithi ephezulu kanye nempilo ende yesevisi.
Sizokhiqiza amamodeli ashisayo omshini ngaphambi kwesikhathi, okuzonciphisa kakhulu isikhathi sokulethwa.
Sinemigqa yokukhiqiza eyi-10 efektri. Umholi weqembu lomugqa ngamunye wokukhiqiza unesibopho sayo yonke inqubo yokukhiqiza umshini. inamasethi angaphezu kuka-150 omshini omkhulu we-CNC wohlobo oluyisicefe nowokugaya, i-NC lathe, umshini wokusika we-NC, isikhungo somshini we-CNC kanye nomshini wokubhoboza ojulile nomshini oyisicefe, ikhwalithi yesixhumanisi ngasinye siyalawulwa.
Ngaphambi kokuthi umshini ushiye imboni, umuntu okhethekile uzoba nesibopho sokugunyazwa komshini futhi anikeze isevisi yokuhlola ividiyo. Nikeza ngezinsizakalo zokubonisana nge-inthanethi zamahora angama-24, ukufakwa kwendlu ngendlu kanye nezinsizakalo zokulungisa ngemuva kokuthengisa emhlabeni jikelele.
Ukufakwa kwemakethe kwemishini ye-hydraulic ye-Unite Top brand kubambe phambili ngokuphephile embonini yaseChina. Imikhiqizo idayiswa emazweni angaphezu kuka-30 nasezindaweni ezimakethe zaseYurophu, e-Asia naseMelika.
I-Leaf Compactor kanye ne-Baler, I-Y81 Hydraulic Baler, I-Scrap Metal Compactor, Umshini we-Aluminium Foil Baler, I-Cardboard Baler eyenziwe ekhaya, I-Pop-Top Can Baler Equipment,